स्टीव रोजगारहरू: इन्फोग्राफिक | Martech Zone
मलाई थाहा छ कि यसको मार्केटिंगसँग खासै सम्बन्ध छैन, तर म यस्तो एप्पल फ्यानबवाय हुँ कि मैले यो स्टीव जॉब्स इन्फोग्राफिक प्रकाशित गर्नुपर्‍यो। मैले यस बारेमा मेरो विचारहरूमा नोटहरू लेखें स्टीव जॉब्सको मृत्यु, र हामीले गरे जुमेरंग सर्वेक्षण थियो कि मान्छे थिए एप्पलको भविष्य बारे आशावादी.
बाट यो इन्फोग्राफिक इन्फोग्राफिक विश्व दुबै स्टीव जॉब र एप्पलको विस्तृत इतिहास प्रदान गर्दछ। यो वास्तवमै राम्रो गरीयो!
वायर्ड म्यागजिनले पनि एक विमोचन गरेको छ स्टीव जॉब्सको एन्टोलॉजीमा ई-पुस्तक त्यो आईप्याड, किन्डल, र नुक्क रंगमा छ।